Ducadii Santa Muerte ee loogu talagalay Qofka Jecel inuu soo noqdo. ? Awood leh
U soo ducee Santa Muerte in qofka la jecel yahay uu soo noqdo. Waxaad awoodi doontaa inaad hesho jawaabaha inta badan codsiyadaada ku saabsan jacaylka.
Qofkaas aad jeceshahay ee aan dhammayn noloshaada ama aan weli jidkaaga ka soo tallaabin wuxuu heli karaa hagida dhimashada Quduuska ah si uu kuugu yimaado ama kuugu helo noloshiisa.
Xaaladahaas oo jacaylka aan u dareemeyno qofka aan dib loosoo celin waa marka aan u baahanahay caawinta aan ku helno salaaddaan awoodda leh waqti habboon, dhakhso iyo waxtar leh.
Waad rumeyn kartaa, ducadan waa mid awood badan. U soo ducee rumaysad weyn oo awoodaada adkee!
1 Waa maxay salaadda Santa Muerte ee soo noqoshada qofkii uu jeclaa?
2 U soo ducee Santa Muerte si aad u soo celiso kan aad jeceshahay
4 Talo: Salaad Santa Muerte si aad u soo celiso kan aad jeceshahay
Muxuu O u leeyahayraashin ay u siiso Santa Muerte si qofkii uu jeclaa ku soo noqdo?
Salaaduhu way u adeegaan waxkasta oo aad ubaahantahay, Codsigu ma noqon karo mid jir ahaan u bogsanaya ama taajir ah laakiin wuxuu noqon karaa mid ruuxi ah oo lagu helo nabad gudaha.
Xaaladdan oo kale ducada ayaa loogu talagalay jacayl hel ama isaga inuu na helo, waxa ugu muhiimsani waa in la ogaado in salaaddu wax walba qaban karto.
Ducadan loo diro Santa Muerte ayaa la rumeysan yahay inay ka bilaabatay qabiilka Aztec ee Mexico, sikastaba ha ahaatee waxaa la ogyahay in ilaa maanta loo qaatay awoodeeda iyo waxtarkeeda.
U soo ducee Santa Muerte si aad u soo celiso kan aad jeceshahay
Santa Muerte, saaxibka haweenka iyo ragga dhibaataysan, waxaan u sujuuday cagahaaga si aan kuu sheego murugadayda.
Waxaan kuu raadinayaa inaad iga caawiso sidii aan uga gudbi lahaa dib udhacyada jacaylkayga.
Murug iyo cidhiidhi baa i qabsaday.
Waxaan kaa codsanayaa inaad dhageysato codsigeyga, dareenkeygu waa daahir oo daacad u yahay qofka aan jeclahay.
Waan ka xumahay xaaladdan oo waxaan raadsadaa nasasho hoostaada khaaska ah.
U hel ereyadan sidii mid muujinaya waxa qalbigayga ku dhacaya.
Naftaydu way tabatay maqnaanshaha (xusid magaciisa) oo waxaan kaa baryayaa inaad xooggayga oo dhan igaga timaadid.
Waan ogahay inaad maqashid baryadayda maxaa yeelay, waxay ka yimaadaan moolka moolka, waxaan ogahay inaad i caawinaysid.
Waxaan kuugu mahadnaqayaa sida nimcooyinka loo mahadceliyo, anigoo ku siinaya dhammaan xushmaddayda iyo kartideyda.
Aniguna waan kuu ballan qaadayaa (ballan ayuu qaadanayaa) Waan dhammaystiri doonaa sila'aan.
Waxaan gacmahaaga kaga tagaa dhibaatooyinkayga dareenka ah, sababtoo ah waxaan si buuxda u aaminsanahay awoodahaaga, Santa mucjiso iyo naxariis.
Santa Muerte oo tan lagu jiheeyo duco waa mid gaar ah Santa Muerte Roja, matalaadeeda jireed waxaa lagu matalayaa gogol midabkeedu yahay midab ruby ​​ah.
Waa la sameyn karaa codsiyo la xiriira dareenka, jacaylka, xiriirka iyo shucuurta.
Waxaa jira kuwa kugula talinaya in la sameeyo meel allabari-nadiif ah oo leh qurbaanno qaarkood oo noqon kara miro, ubaxyo, macmacaanno ama tuugo.
Ducada Santa Muerte si loo soo celiyo qofkii uu jeclaa waa in lagu sameeyaa horteeda meeshiisa allabariga toddobada maalmood iyo dhamaadka wakhtigan waxa la joogo waqtigii la sugi lahaa mucjisada inay dhacdo.
Jawaabtu shaki la'aan waa mid togan maadaama, sannadihii la soo dhaafay, marqaatiyada rumaystayaasha ay u yimaadeen oo ay heleen caawimaad ayaa la ogaa.
Intaa waxa u dheer, salaadda oo dhan lagu sameeyo iimaan waa xoog badan yihiin.
Way xoog badan tahay. Waxaan ubaahanahay oo kaliya inaan lahaano caqiido.
Talo: Salaad Santa Muerte si aad u soo celiso kan aad jeceshahay
Waxaan rabaa inaan bixiyo talo fudud si aan salaadda uga dhigo mid adag.
Iftiimin 7 shumac casaan horteeda muuqaalka Santa Muerte. Hadaad guuleysato, shumacyada shumaca hortooda taallo taallada dhimashada barakeysan.
Sii shumacyo iyada. Shumacyada waa deeq aan kuugu mahad celiyo.
Waxaad awoodi kartaa Ballan qaado inta lagu gudajiro dhaqankan. Waxaad ballan qaadi kartaa inaad shumacyo badan shiddo ama aad nooc kale oo ah soo bandhigto.
Qaabkaasi salaaddaadu dhaqso ayey u shaqeyn doontaa. Dhammaan caawimaadda loo baahan yahay waxaa lagu heli doonaa hab ka fudud oo xoog badan.
Haddii aad rabto inaad qofkii aad jeceshahay dib uugu soo celiso, waxaad u baahan tahay inaad tukanaysid ducadan geerida Quduuska ah.
U ducee Santa Muerte jacayl aan macquul aheyn
Salaadda loogu talagalay Saint Cyprian xoogga badan